Dr Culusow: Farmaajo In la baryo sax ma ahan - Awdinle Online
Dr Culusow: Farmaajo In la baryo sax ma ahan
November 23, 2019 (AO) – Ugu horreyn waxaan hoggaamiyayaasha Madasha Xisbiyada Qaranka (MXQ) ugu hambalyeynayaa inay la kulmeen Madaxweyne Farmaajo si looga wada hadlo khilaafaadka siyaasadeed, sharcidarro, xadgudubyo, nabadgelyo xumo, iyo maamulxumo ee dalka ka taagan. Haseyeeshe, waxaa muuqata nasiib darro in Madaxweyne Farmaajo uusan muujiin garawshiyo iyo niyadsami uu ku qaabilay dabacsanaanta iyo wanaagga Madaxda MXQ.
Ilaa waqtigaan la joogo ma arag mana maqal meel uu Madaxweyne Farmaajo uga hadlayo, ku muujinayo fikirka, dareenka, iyo qiimeynta uu ka qabo la kulanka Madaxda MXQ. Taas waxay caddeyneysaa in Madaxweyne Farmaajo uusan la wadaagin MXQ aragtida, dareenka, iyo qiimeynta ay ka qabaan la kulanka Madaxweynaha JFS.
Waxaan aad ula yaabay in Madaxweyne Farmaajo lagala gorgortamayo qabashada doorashada 2020/2021 oo ah waajib dastuuri ah ayadoo la og yahay in Barlamaanka Federaalka iyo Madaxweyne Farmaajo aysan haysan sharciyad ay dalka ku xukumi karaan wixii ka dambeeya 27 disember 2020 iyo 7 Febraayo 2021.
Ma jiro qodob dastuuri ah ee BF iyo Madaxweynaha JFS u oggolaanaya waqti kordhis.
Sidoo kale, waxaa cajiib ah in Madaxweyne Farmaajo laga codsaday dhowrista dastuurka, ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta, ka qaadidda cunaqabateynta dadka Gobolka Benadir, iyo inaan Ciidammada iyo shaqaalaha dowladda la siyaasadeyn ama loo adeegsan dano siyaasadeed ee dastuurka xaarantimeeyay iyo in DF la heshiiso Dowlad Goboledyada. Madaxweyne Farmaajo waxaa loo doortay ilaalinta ku dhaqanka dastuurka dowlad wanaagga iyo xoojinta is fahamka (cohesion) iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed.
Ugu dambeyn Madaxweyne Farmaajo kama bixin wax cudurdaar ah, ka garaabid ah xadgudubyada lama iloobaanka ee DF ku sameysay siyaasin iyo muwaadiniin badan.
Sidaa darted, waxaa la dhihi karaa in kulanka Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda MXQ ahaa mid dhicisoobay, laguna hungoobay.
Previous articleXisbiga Wadajir oo Iska diidey la kulanka Madaxweyne Farmaajo
Next articleDowladda China oo Caalamka ugu baaqday in la caawiyo Soomaaliya